क्लियोपेट्रा प्लस को यो ऐतिहासिक खेल अन्तिम मिश्रको रानी पूरा र प्राचीन मिश्र पुग्न समय मिसिन यात्रा. क्लियोपेट्रा प्लस लन्डन मा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय गेमिङ प्रौद्योगिकी को विकासकर्ताले डिजाइन र विकास गर्ने क्लियोपेट्रा स्लट को श्रृंखला को एक भाग हो. खेल खेलाडी धेरै captivating कमाई विकल्प प्रदान गर्दछ र यसरी igt स्लट को यो श्रृंखला बाहिर विशाल कमाउन छ.
Igt प्रोभिडेन्स यसको प्रमुख कार्यालय संग लन्डन मा मुख्यालय छ, एक खेल हब छ लस भेगास, र रोम. यस संस्थाको भन्दा बढी मा संचालित 100 र मात्रा को अर्थव्यवस्था र हात मा धन को प्रशस्त गर्न owing विश्वभरमा देशहरूमा, तिनीहरूलाई द्वारा सिर्जना खेल मा खेलाडी गर्ने प्रस्ताव गर्न धेरै बोनस विकल्प. यो कम्पनी अनलाइन र अफलाइन क्यासिनो लागि स्लट खेल साथ खेल प्रविधिको विभिन्न प्रकारका उत्पादन.
क्लियोपेट्रा प्लस छ5रील र 40 खेलाडी गर्ने प्रस्ताव गर्दै छन् paylines. यो खेल मा बोनस सुविधाहरू को रूप मा धेरै भुक्तानी विकल्प हो.
स्तर माथि विशेषता- यो खेलाडी उहाँले खेल्छ खेल गुणस्तर र अवधि अनुसार कमाउन दिन्छ, जो उसलाई उच्च स्तर अनलक गर्न अनुमति दिन्छ.
बोनस मानचित्र- प्लेयर एक मार्गदर्शक नक्शा जब क्लियोपेट्रा बोनस सक्रिय प्रयोग गरिन्छ जो दिन्छ. यो पनि निःशुल्क spins दिन्छ.
फ्री spins बोनस- दिन्छ5एक 1x गुणक निःशुल्क spins
क्लियोपेट्रा बोनस- बोनस नक्साको मदत पाएर, तपाईं सम्म जित्न सक्छौं 30 गुणक 5x सम्म अतिरिक्त निःशुल्क spins वा 10 सुपर एक 50X गुणक संग spins. तर यो सबै तपाईं खुला गरेको स्तरमा निर्भर.
क्लियोपेट्रा, जङ्गली र स्ट्याक्ड जंगली हुनुको, खेल को उच्चतम पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्छन् भने5तिनीहरूलाई को payline सँगै. यो स्ट्याक्ड wilds थप जितको को संभावना वृद्धि. यो2wilds एक 2x गुणक दिन तिनीहरूले स्ट्याक्ड गर्दा.
खेलको खेलाडी प्रतिशत रिटर्न छ 95% जो एकदम सभ्य छ.
क्लियोपेट्रा प्लस बाहिर विशाल पेआउट खेल्दै र कमाउन गर्न प्रमुख लागि स्पष्ट नियम बुझ्न यो बढी खेल्न छ. खेल पनि कम ग्राफिक गुणवत्ता संग पनि प्रतीक फैंसी र प्राचीन मिश्र को विषय सम्बन्धित गर्न रचनात्मक छैनन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद मार्फत खेलाडीको ध्यान लो व्यवस्थित छ.